पुरुषलाई सारी ! |
पुरुषलाई सारी !
प्रकाशित मिति :2018-03-28 17:24:20
केही दिनअघि अनायासै मनमा खुल्दुली चल्यो ।
किन केटीले मात्रै सारी लगाउँछन्, केटाले लगाउँदैनन् ?
पुरुषले सारी लगाउँदैनन्, र कसैले किन लगाउँदैनौ भनेर सोधेको आजसम्म मैले सुनेकी छैन । पुरुषप्रधान समाजमा यस्तो प्रश्न सोध्ने दुस्साहस कसैले गर्दैनन्, किनकी यसले पहिरन होइन, महिलासित पुरुषलाई दाँज्छ, उनीहरूको मर्दाङ्गीलाई आघात पर्छ । आफूलाई महिलाभन्दा अब्बल र सक्षम ठान्ने भएकोले महिला हुनु पुरुषका लागि लज्जाको विषय हो । त्यसमाथि, समाजले महिलालाई निर्बल र कमजोर मानेको छ । महिला भन्दा बहादुर र बलवान् भइरहन पनि उनीहरू महिलासँग दाँजिन मञ्जुर छैनन् । कसैले सोधिहाल्यो भने पक्का छ, त्यो प्रश्न गर्ने पिटिनेवाला छ । यत्ति साह्रो रिस उठ्छ पुरुषलाई महिला हुने ‘अपमान’ सहँदा !
सारी त एउटा उदाहरण मात्र हो । पुरुषको अपमान महिलाको पहिरनले मात्रै होइन, महिलाको भनेर चिनिएका कतिपय सन्र्दभ र व्यवहारले पनि हुने गर्छ । महिलाको कुनै पनि कुरा पुरुषसँग दाँजिनु हुँदैन । खासगरि, छिट्टै रुने वा लजालु स्वाभावका पुरुषले महिला भएको ‘अपमान’ भोग्नु नौलो हुँदैन । सानो स्वर भएका, धेरै हाँस्ने र हाँस्दा हातले मुख छोप्ने लगायतका हाउभाउ कुनै पुरुषले देखाउँछ भने बुझौं, उसले महिला भएको ‘अपमान’ भोगेकै छ ।
अझैपनि समाजमा पुरुषले बहादुरी देखाउन नसक्दा कस्तो आइमाई जस्तो लाछी रहेछ, हातमा चुरा लगाएर बस् भन्ने जस्ता महिलाको मानमर्दन हुने खालका आरोप लगाइन्छ । यस्तो ‘महिलामय’ हुनै नहुने समाजमा पुरुषले महिलाको ठाउँमा आफू हुने कल्पना समेत गर्दैन र, गरेपनि उसले देखाउन चाहँदैन । त्यसैले, कुनै पनि समय महिला जस्तो नदेखिनेमा पुरुषहरू सजग छन् ।
आफ्ना संवेदना, भावना र आवेगलाई समेत ‘महिलाको’ ठान्दा पुरुषहरूले मनको वह समेत कसैलाई सुनाउन सक्दैनन् । पुरुषहरू आँखाभित्रै आँसु सुकाउँछन् । विभिन्न कारणले पीडित हुँदा समेत आफू फलानोबाट पीडित छु भन्न बडो सकस हुन्छ, उनीहरूलाई । अझ, पीडक चाँहि महिला परिन् भने उनीहरू बोले पो ! फेरि, उनीहरूले आफू कुनै महिलाबाट पीडित छन् भनेर भनिहाले पनि त्यसले जग हँसाउने बाहेक केही पनि गर्दैन । त्यहिकारण, बरु आडम्बर देखाएरै भए पनि पुरुष ‘पुरुष’ नै भइरहन्छन् ।
जन्म र कर्मले पुरुष र महिलालाई फरक बनाएकोले एकअर्काबिच वैमनस्यता हुनु, मित्रता हुनु, एकले अर्कोजस्तै बन्ने चाहना राख्नु वा एकापसमा आर्कषण हुनु सामान्य हो । यस्तै, दुवैमा धेरै मानवीय गुणको पनि समानता हुन्छ । तर, महिलाभन्दा जहिले पनि, हरेक कुरामा आफूलाई ठूलो, भिन्न ठान्ने कतिपय पुरुषका कारण महिला मानव नभएर केवल ‘महिला’ भएका छन् । उनीहरूका आवश्यकता, माग, पहिचान र सार्मथ्य ‘महिलाका कुरा’ मा संकुचित भएका छन् । अनि, धेरै महिला आफ्नो कामले चिनिन सकेका छैनन् ।
महिलालाई कमजोर मानेर गरिने हिंसाका फेहरिस्त झन् भनिसाध्य छैन । छोरा जन्माउन छोरीको भ्रुण हत्या गर्नेदेखि, बच्चैदेखि छोरालाई मात्र विशेष भएको अनुभूति दिलाइरहने सामाजिक चलनले महिलालाई सानैदेखि विभेद सहन र पुरुषलाई सो विभेदको साक्षी बनाइरहेको हुन्छ । यस्तो सामाजिक संस्कारविच हुर्केका पुरुषले महिलालाई आफू सरह कसरी ठान्न सक्छन् ?
अर्कोतिर, छोरीलाई दिइने शिक्षा, संस्कारमा पुरुषलाई आफूभन्दा ठूलो मान्नुपर्ने सिकाइन्छ । घरभित्र, बाहिर, सडकदेखि सदनसम्म पुरुषकै वर्चस्व हुँदा आम महिलाले कहिल्यै आफूलाई अधिकार र योग्यतामा पुरुष सरह ठान्दैनन् । महिलालाई जहिल्यै पुरुषको संरक्षणमा बस्नुपर्छ । आज पनि हाम्रै समाजमा कतिपय महिलाले श्रीमान्सँगै बसेर खान, घरका अन्य पुरुष सदस्यलाई सीधा आँखाले हेर्न र राम्रो संवाद गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि, महिलाले आफ्नो पहिचान र अधिकार समेत पुरुषले दिएपछि मात्रै पाउने भएकोले पुरुषले आफूलाई सर्वोपरि ठान्नु जायजै देखिन्छ ।
तर, आजका महिला यस्तो असमान सम्बन्धका बावजुद आफ्नो योग्यता र सामथ्र्यलाई तिर्खान चाहन्छन् । संसारमा कुनै पनि त्यस्ता काम छैनन्, जुन महिलाले नगरेका हुन् । सेना, प्रहरी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, वैज्ञानिक लगायत पुरुषहरू मात्र हुने संसद र देशको उच्च पदस्थ पदमा समेत महिलाहरू पुगेका छन् । सामान्य तहमा पुरुषहरूले मात्र गर्दै आएका प्लम्बिङ, ड्राइभिङ, पेन्टिङ, कार्पेन्टिङ, वाइरिङ, मेकानिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मिस्त्री लगायत खतरनाक र साहसिक मानिएका धेरै काममा उनीहरू संलग्न देखिन्छन् ।
महिलाले आफूलाई परम्परागत भन्दा भिन्न काममा संलग्न बनाउन चाहेको सकरात्मक नै भएपनि धेरै क्षेत्रका पुरुष सहपाठीहरू भने उनीहरूलाई ‘पुरुष’ हुन खोजेको आरोप लगाउँछन् । त्यसैले त, कुनै पुरुष डाक्टरलाई ‘तपाइँ फलानो महिला डाक्टर जस्तै जेहन्दार हुनुहुँदो रहेछ’ भनेको कत्ति पनि मन पर्दैन । अनि, कुनै पुरुष प्लम्बरको अगाडि महिला प्लम्बरको तारिफ गर्नुस्, भोलिदेखि तपाइँको काम नै रोकिनेछ ।
पुरुष हुँदैमा सक्षम, बलवान हुने र महिला हुँदैमा पीडित, कमजोर हुने हुँदैन । अनि, महिला अघि बढे भन्नुको अर्थ पुरुष पछाडि परे भन्ने पनि होइन । महिला र पुरुष दुवै सक्षम हुनुपर्ने आजको युगमा सक्षम जो छ, उसले अर्कोलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
महिलाले गर्दै आएका काम झन् पुरुषले गर्ने कुरै भएन । पत्नी दिनभर कार्यालयमा आफू सरह खटिएपनि पुरुषले घरधन्दा नर्गने कारण यहि हो । घरको सरसफाई, बालबच्चाको हेरचाह\_सरसफाई, किनमेल, भान्छाको काम लगायत ‘महिलाको’ मानिएका कुनै पनि काममा पुरुषको रुचि नहुनुको अरु कुनै कारण छैन । पुरुष अहम्का कारण पत्नीको माया भए पनि उसले घरधन्दामा सघाउन सक्दैन । घरधन्दा मात्र होइन, महिलाले गर्दै आएका सिलाई बुनाई, हस्तकला, खेतीपाती लगायतका काममा पनि पुरुषले खासै रुचि देखाउँदैनन् । समाजले समेत महिलाले गर्दै आएका कामलाई हेयको भावले हेर्ने र पत्नीसँग मिलेर काम गर्नेलाई जोइटिङग्रेको उपमा दिने भएकोले यस्ता काममा पुरुष अगाडि सर्दैनन् ।
आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक आदि विभिन्न कुरामा समान नठानिएकैले पुरुषले महिलालाई कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धीको रुपमा लिँदैनन् । लिंगका आधारमा कसैलाई सबल र सक्षम ठान्नु वा कमजोर ठान्नु एक खालको विभेद नै हो । मानिसको सक्षमता जाँच्ने विभिन्न कडी हुन्छन्, जुन समय र परिस्थिती अनुकूल परिवर्तित हुन्छन् । पुरुष हुँदैमा सक्षम, बलवान हुने र महिला हुँदैमा पीडित, कमजोर हुने हुँदैन । अनि, महिला अघि बढे भन्नुको अर्थ पुरुष पछाडि परे भन्ने पनि होइन । महिला र पुरुष दुवै सक्षम हुनुपर्ने आजको युगमा सक्षम जो छ, उसले अर्कोलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
साँच्चै, पुरुषहरू सारी लगाएर हिँड्दा कस्ता देखिँदा हुन् ? के पुरुषले कहिल्यै सारी लगाउनेबारे सोचेका छन् ?